Nezvedu - Linyi Win-Win Machinery Co., Ltd.
Linyi Win-Win Machinery Co, Ltd. (ipfupi se "Ntek") yakavambwa muna2009, ichiwana muLinyi Guta, Shandong dunhu, China. Iyo yakazvimiririra chirimwa inovhara zvinopfuura 18,000 mativi emamirimita, iine matanhatu ehunyanzvi ekugadzira mitsara kutsigira gore rega rekutengesa vhoriyamu.
Ntek digital yekudhinda michina yaitumirwa kunze kwenyika kubva muna 2012, nekurumbidzwa kwakapararira uye kuzivikanwa nevatengi vedu, maprinta edu anogamuchirwa kupfuura nyika zana nemakumi mashanu muAsia, Europe, Australia ne Africa etc.
Vapinduri veNtek UV vanga vachishandiswa zvakanyanya mukushambadzira, kusaina, kushongedza, girazi, hunyanzvi uye mamwe maindasitiri. Isu tinosimbisa hunyanzvi hwekugadzira zvinhu, tinogonesa mutengo wekushandisa, uye tinoedza kugadzira yakanakisa UV michina yekudhinda yedhijitari kumutengi wedu, uye mamwe mhinduro dzakazara maererano nezvinodiwa zvakasiyana mumaindasitiri akasiyana siyana.
Ntek inotsigira pfungwa yekugona, uye inoramba ichivandudza chigadzirwa mhando, kuti ive inonyanya kuvimbwa mhando muVV kudhinda michina indasitiri. Ticharamba tichizvipira kumabhizimusi kudhinda R & D uye hunyanzvi uye kusimudzira hutano hwakanaka hwekudhinda indasitiri.
Kambani Floor Nzvimbo 20000㎡
Hofisi Center 4000㎡
Kugadzira Center 12000㎡